कसरी आहार र पूरकहरूको साथ आयोडिन अभावको उपचार गर्ने - कल्याण | सेप्टेम्बर 2021
औषधि जानकारी, समाचार स्वास्थ्य औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण समाचार, कल्याण कल्याण औषधि बनाम मित्र प्रेस समुदाय, कम्पनी समुदाय, कल्याण मनोरञ्जन कम्पनी, औषधि जानकारी घरपालुवा जनावर
मुख्य >> कल्याण >> कसरी आहार र पूरकहरूको साथ आयोडिन अभावको उपचार गर्ने
आयोडिन भनेको के हो? | आयोडिनको कमी | दैनिक सेवन सिफारिशहरू | खाना | पूरक
आयोडीन हाम्रो शरीरहरूको लागि आवश्यक पोषक तत्व हो, र यसले धेरै शारीरिक कार्यहरू कायम राख्न मद्दत गर्दछ। आयोडीन युक्त खाद्य पदार्थहरू स्वस्थ आहारको मुख्य तत्त्व हुन्, यद्यपि सबैलाई यस पौष्टिक तत्त्वको नियमित मात्रा हुँदैन। यदि तपाईं आयोडीनको कमीका लक्षणहरू, खानामा आयोडिन घटाउने प्राकृतिक तरिकाहरू, र विभिन्न प्रकारका आयोडिन सप्लीमेन्टहरू उपलब्ध छन् भनेर जान्न चाहानुहुन्छ भने, पढिरहनुहोस्।
आयोडिन भनेको के हो?
आयोडिन ट्रेस खनिज हो जुन थाइरोइड हर्मोनको उत्पादनका लागि आवश्यक छ ट्रायोडायोथेरोनिन (T3) र थाइरोक्सिन (T4) । यो निन्द्रा, चयापचय, र समग्र विकास र विकासको लागि भवन ब्लक हो। धेरै व्यक्तिहरूलाई नियमित रूपमा पर्याप्त आयोडिन प्राप्त हुन्छ, यद्यपि, केहि उदाहरणहरूमा, अभावको सामना गर्न आयोडिन पूरक आवश्यक हुन सक्छ।
आयोडिनको कमी के हो?
जब तपाईंसँग आयोडिनको कमी छ, तपाईंको शरीरलाई आयोडिन चाहिने त्यति पाइरहेको छैन। आयोडिनको कमीको सबैभन्दा सामान्य कारण भनेको डाईटमा आयोडिनको अभाव हो Kasey Nichols , NMD, जो प्राकृतिक चिकित्सामा विशेषज्ञ छन्। आयोडिनको कमीले गम्भीर चिकित्सा अवस्था निम्त्याउन सक्छ। भाग्यवस, १ 24 २। मा तालिका नुनमा आयोडिनको समावेश भएको कारण, संयुक्त राज्य अमेरिकामा आयोडिनको अभाव अपेक्षाकृत असामान्य छ।
जे होस् धेरै जसो अमेरिकीहरूले परम्परागत पश्चिमी आहारको साथ पर्याप्त आयोडिन पाउँदछन्, यो आयोडिन असंतुलनसँग सम्बन्धित लक्षणहरू र यसले कसरी तपाईंको समग्र स्वास्थ्यलाई असर गर्न सक्छ भन्ने कुरा बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ।
पेट बिग्रिएको पेट को लागी पेप्टो बिस्मोल कसरी काम गर्दछ
तौल बढाउनु, कठिनाइहरू सिक्नु, अक्सर चिसो पाउनु, र थकान आयोडिनको कमीको सामान्य लक्षणहरू हुन्। आयोडिनको कमीको एक अधिक गम्भीर र प्रमुख लक्षणहरू मध्ये एक हो गोइटर , जो घाँटीमा बल्ज हो बृद्धि भएको थाइरोइड ग्रंथिको कारणले। आयोडिनको कमी भएको व्यक्तिसँग अन्य थाइरोइड विकारको जोखिम बढेको छ, जस्तै हाइपोथायरायडिज्म (एक थाइरोइड रोग अपर्याप्त थाइरोइड हर्मोन उत्पादनको कारण हुने)। बढ्दो बच्चाहरूको मामलामा, गम्भीर आयोडिनको कमीले अन्य स्वास्थ्य समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ बौद्धिक अक्षमता , ढिलो मस्तिष्क विकास, वा अचेत विकास।
आयोडिनको कमीको उपचार गर्न, व्यक्तिले केहि आयोडिन युक्त खाद्य पदार्थको सेवन बढाउन सक्दछ, वा आयोडिन सप्लीमेन्ट लिन सक्छ।
मलाई आयोडिन चाहिएको छ भने कसरी थाहा पाउने?
आयोडिन अभावको निदानको पहिलो चरण भनेको तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सम्पर्क गर्नु हो। उसले वा उसले तपाईंको आयोडिन स्तरको परीक्षण गर्न विभिन्न तरिकाहरूमा परीक्षण गर्न सक्षम हुनेछ यदि तपाईंलाई आहार आयोडिनको अभाव छ भने। त्यहाँ केहि फरक परीक्षणहरू छन् जुन यस प्रक्रियालाई सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।
दुई सब भन्दा साधारण आयोडिन परीक्षणहरू एक पेशाब परीक्षण र रगत परीक्षण हो, जुन आयोडिनको स्तर जाँच गर्ने दुबै छिटो र सजिलो तरीका हो। यद्यपि, यूरिनलिसिस रगत परीक्षण जत्तिकै सही नहुन सक्छ। अर्को विकल्प अधिक गहन मूत्र लोडिंग टेस्ट हो, जसले २ ur घण्टा भन्दा बढीमा तपाईंको पेशाबमा आयोडिन एकाग्रता देखाउँदछ। यो एक अत्यन्त सटीक परीक्षण हो, यद्यपि यो पूरै दिनको लागि सबै मूत्र नमूनाहरू प्राप्त गर्न असुविधाजनक हुन सक्छ। अन्तमा, आयोडिन प्याच परीक्षण पूरा हुन लगभग २ around घण्टा लाग्छ, तर यो सटीक छैन। यो परीक्षणको साथ तपाईको चिकित्सकले छालाको प्याचलाई आयोडिनको साथ पेन्ट गर्दछ र शरीरले कति चाँडो यसलाई अवशोषित गर्दछ भनेर अवलोकन गर्दछ।
यी परीक्षणहरूको नतीजा र बिरामीका लक्षणहरूमा निर्भर गर्दै, एक डाक्टरले थप परीक्षणहरू जस्तै TSH परीक्षण थाइरोइड हर्मोनको स्तर तोक्न र कसरी तिनीहरू आयोडिनको कम स्तरले असर गरेको हुन सक्छ।
मलाई कति आयोडिन चाहिन्छ?
आयोडिन को लागी एक आवश्यक घटक हो उचित थाइरोइड प्रकार्य र विकासात्मक बृद्धि, आयोडिनको मात्रा एक व्यक्तिलाई चाहिन्छ तिनीहरूको जीवन चरणमा निर्भर गर्दछ।
तल आयोडिन खपतका लागि सिफारिश गरिएको दैनिक सेवनको सूची छ स्वास्थ्य को राष्ट्रीय संस्थानहरु :
दैनिक आयोडिन सेवन सिफारिशहरू
जीवन चरण सिफारिश दैनिक सेवन
जन्म to महिना ११० एमसीजी
शिशुहरू –-१२ महिना १ m० एमसीजी
बच्चाहरू १-– वर्ष 90 mcg
बच्चाहरू – -१– बर्ष १२० एमसीजी
किशोर १–-१– वर्ष १ m० एमसीजी
वयस्कहरू १ m० एमसीजी
गर्भवती महिला २२० एमसीजी
स्तनपान गर्ने महिला २0० मिलिग्रा
नोट: गर्भवती र स्तनपान गराउने महिलालाई सबैभन्दा बढी आयोडिन चाहिन्छ, किनकि आयोडिनको स्तर उनीहरूको बच्चाको विकासको बखत हुन्छ। यसको कारणले, स्तनपान गराउने महिलाहरूमा आयोडीन खपतको अधिकतम सिफारिश गरिएको मात्रा हुन्छ यो सुनिश्चित गर्नका लागि कि उनीहरूको स्तनको दूधमा उनीहरूको बच्चाको लागि पर्याप्त आयोडिन छ।
आयोडीन कति छ?
अधिकतम आयोडिन आवश्यकताहरू पनि जीवन चरणबाट अस्थिर हुन्छन्। उदाहरण को लागी, एक कान्छो बच्चाले एक दिनमा m०० mcg आयोडिन भन्दा बढि हुनु हुँदैन, जबकि एक परिपक्व वयस्कको माथिल्लो सीमा १,१०० mcg को हुन्छ। धेरै नै आयोडिनले आयोडिन अभाव जस्ता लक्षणहरू उत्पन्न गर्न सक्छ, जस्तै गोइटर वा हाइपरथायरायडिज्म।
खानामा आयोडिनको राम्रो स्रोतहरू के के हुन्?
आयोडीनयुक्त तालिका नुनले २० को दशकमा आयोडिन अभाव बिरामीहरूको एक धेरै समाधान गर्‍यो, डाटा सुझाव आयोडिन अभाव समस्या संयुक्त राज्य अमेरिकामा पुनः देखा पर्न सक्छ किनकि धेरै उपभोक्ताहरूले नन-आयोडाइज्ड कोशर नुन र समुद्री नुनको लागि छनौट गर्छन्।
भाग्यवस, त्यहाँ नुनको अलावा धेरै आयोडिनयुक्त खाद्य पदार्थहरू उपलब्ध छन्। तपाईले डेयरी उत्पादनहरू (विशेष गरी दुध र अण्डाहरू) र समुद्री खाना (माछा, झिंगे, र समुद्री शैवाल) मा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको खानामा थप आयोडीन समावेश गर्न। फलफूल र तरकारीहरू पनि आयोडिनको राम्रो खाना स्रोत हुन्, विशेष गरी लिमा गेडाहरू, केरा, वा मकै।
केहि सब भन्दा सामान्य आयोडीन युक्त खाना र उनीहरूको प्रतिशत दैनिक मान (% डीवी) तल सूचीबद्ध छ। यी संख्याहरु बाट आउँछ स्वास्थ्य को राष्ट्रीय संस्थानहरु आयोडिन खाना खपतका लागि सिफारिशहरू।
आयोडिनयुक्त खाद्य पदार्थ
खाना आयोडिन माइक्रोग्राम प्रति सेवा प्रतिशत दैनिक मान (% DV)
समुद्री शैवाल (नोरी, कोम्बु, वाकाम्बे, अरमे) बीचमा दायरा १-2-२,8484। एमसीजी प्रति १ ग्राम समुद्री शैवालको ११% -१.89 89%%
कोड बेक्ड कोडको o ओजमा m 99 एमसीजी % 66%
दूध कम कपडायुक्त दूधको १ कप प्रति fat fat एमसीजी % 37%
रोटी White 45 एमसीजी प्रति २ स्लाइस, सेता समृद्ध रोटी %०%
झींगा M 35 एमसीजी प्रति o औंसको झिंगा २.%%
अण्डा प्रति अण्डा २ 24 एमसीजी १%%
टूना १ एमसीजी प्रति o औंस टुना (तेलमा क्यान्ड) एघार%
लीमा सिमी M एमसीजी प्रति ½ कप उमालेको लिमा गेडाहरू %%
मकै १ m एमसीजी प्रति ½ कप क्रीम गरिएको मकै %%
केरा प्रति १ केरा3mcg दुई%
सम्बन्धित: के तपाईको लागि नुन खराब छ? यहाँ किन वैज्ञानिकहरू सहमत हुन सक्दैनन्
के तपाई आयोडिन सप्लीमेन्ट लिन सक्नुहुन्छ?
आयोडिन सप्लीमेन्टहरू क्याप्सुल वा ट्याब्लेटहरूको रूपमा ओभर-द-काउन्टर उपलब्ध छन्। ती मध्ये केही आयोडीन युक्त क्याल्प (समुद्री शैवालको एक प्रकार) बाट लिइएको हो। यी उत्पादनहरूलाई प्रिस्क्रिप्शनको आवश्यक पर्दैन, तर अन्य आयोडिन सूत्रहरूबाट तिनीहरूलाई छुट्याउन आवश्यक पर्दछ।
यो हाम्रो शरीरहरूको लागि एक आवश्यक पोषक तत्व हो, तर आयोडिनलाई पनि प्राथमिक कटौती वा एन्टिसेप्टिकको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ साना कटौती वा घाउहरूको उपचार गर्न र संक्रमणलाई रोकथाम गर्न। आयोडिन टिंचर र आयोडीनको अन्य तरलमा आधारित प्रकार बाह्य प्रयोगको लागि मात्र डिजाइन गरिएको हो र इन्जेस्टेड हुँदैन।
Lugol's समाधान , जसले पोटेशियम आयोडाइड समावेश गर्दछ, पूरकको रूपमा प्रयोग गर्न चाहिँदैन। यो थायरोटोक्सिकोसिस (थाइरोइड आँधी) वा विकिरण आपतकालिनको उपचारमा एक डाक्टरको सुपरिवेक्षण अन्तर्गत पचाउन सकिन्छ। एक चिकित्सा पेशेवरको निर्देशन र पर्यवेक्षण बिना आयोडिन युक्त तरल पदार्थ नलगाउनुहोस्।
टाइप2मधुमेह को लागी सामान्य a1c स्तर
यदि तपाईं आयोडिन सप्लीमेन्ट लिन चाहानुहुन्छ भने उत्तम छ कि तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायक वा डाइटिशियनबाट राम्रो सल्लाह लिन राम्रो प्रयोग हुन सक्ने उत्तम उत्पादनहरूको बारेमा, र कुन डोज तपाईंको लागि सहि छ। सामान्यतया, यस प्रकारका पूरकहरूमा १ m० एमसीजीको आयोडिन सामग्री हुन्छ, जुन आयोडिनको मानक मात्रा हो जुन एक वयस्कले दैनिक प्राप्त गर्नुपर्दछ। यद्यपि सबैको फरक हुन्छ जब यो पौष्टिक आवश्यकताको कुरा आउँदछ, र अधिक आयोडीन युक्त खाद्य पदार्थ खाने केही व्यक्तिहरूको लागि उत्तम उपचार विकल्प हुन सक्छ।
कुन म्याग्नेशियम पूरक मेरो लागि सही छ?
के यो मोतियाबिंदै बस्नु जस्तो हो
हाइड्रोकोडोन गोलिहरु कती लामो समय को लागी राम्रो छ
के तपाइँ गर्मीमा चिसो समाउन सक्नुहुन्छ?
pseudoephedrine तपाइँ औषधि परीक्षण असफल बनाउन सक्नुहुन्छ
के म एक पटक मा 1200 mg ibuprofen लिन सक्छु?
म रक्सी संग के दुखाई कम गर्न सक्छु
कति आईबुप्रोफेन यो od गर्न लाग्छ